Ohatran'ny tsy azoko loatra ilay fepetra sy maso-tsivana nandraràna ireo fiondranana ara-piaramanidina ka anidiana ny sisin-tany. Amerika sy Bresil mbola ambony be ny taham-pamindràna ny aretina Covid-19 nefa tsy voarara.Ireo Firenena mandrafitra ny Union Européenne efa afaka mifamezivezy ry zareo samy zareo, fa ny atsy Frantsa sy Allemangne sy firenena eoropeanina vitsivitsy ihany no raràna. Misy mpandeha koa anie avy any France dia miampita aty Kenya, dia efa en provenance Afrique izay dia mahazo miditra? Afaka manamboatra billet départ Kenya izy, sa lasa ny nationalité indray no anakanana azy? I Chine sy Inde ary Arabie Saoudite moa tsy voaresaka ka asa koa ny amin'ireo.
Nohamafisina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 21 oktobra 2020 fa “Azo atao ny mivarotra sy mampiasa ireo tahirin-kazo tsotra entina handaminana ny sehatra miasa amin’ny hazo tsotra. Saingy raràna kosa ny fivarotana sy fanondranana hazo any ivelany. Ireo vokatra efa voarafitra ihany no azo haondrana”. Miditra amin’ny sehatry ny ara-dalàna ka ireo tahirin-kazo ihany no azo amidy sy ampiasaina, mbola voarara ny fanapahana hazo. Hisy ny mason-tsivana amin’ny famoahana ireo vokatra.Hapetraka ny tambazotra fanaraha-maso ny fivezivezen’ny hazo sy ny famoahana izany isam-paritra. Hamafisina ny fiarovana ireo faritr’ala mba hisorohana ny fanapahana hazo sy fitrandrahana tsy ara-dalàna ; ary ampitomboina ny faritra hovolena hazo mba hahatrarana ny tanjona handrakotr’ala an’i Madagasikara.
mercredi, 21 octobre 2020 10:06
Fampandrosoana ny indostria eto Madagasikara : Ampirisihina ny fanjifana ny vita malagasy
Tontosa ny talata 20 Oktobra 2020 ny fanaovan-tsonian’ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) sy ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA) ho fampandrosoana ny indostria eto Madagasikara, indrindra eny anivon’ny Distrika. Misy ny tetikasa ODOF « Distrika Iray Indostria Iray » imasoan’ny minisitera. Teboka lehibe ao anatin’izany ny fampiroboroboana ireo vokatra Vita Gasy sy ny famerenana ny fanjifana ny Vita Gasy amin’ny alalan’ny « Label Malagasy Ny Antsika ». Hisitraka fanohanana ara-teknika avy amin’ny SIM ary fanampiana ara-pitaovana ho amin’ny fanodinana vokatra avy amin’ny MICA ireo indostria madinika sy salantsalany izay hipetraka eny anivon’ny Distrika amin’ny alalan’ny tetikasa ODOF. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 17 octobre 2020 14:39
Sanda fifanakalozana : Tsy mitsaha-mitotongana ny Ariary
Hananika ny 4 000ar ny dolara amerikanina, ary mihoatra ny 4500ar ny Euro.
samedi, 10 octobre 2020 21:29
Manakara: Mikendry ny hamokatra tantely 160 taonina isan-taona
Fantatra hatrany ampitan-dranomasina ny hatsaran’ny tantely avy aty Manakara ary efa nahazoana mari-pankasitrahana volafotsy amin’ny kalitao tantely tena natioraly toa ny miel d’eucalyptus, litchis, niaouli an’ny Ilanga Nature - SSM Madagascar. Nisy omaly ny fanomezana tranon-tantely miisa 20 avy, sy fampindramam-bola ireo tantsaha mpamokatra tantely 188 at Manakara, sy amin’ireo Kaominina miisa 18 manodidina, ho fampiroboroboana ny famokarana tantely. Manohana azy ireo amin’izany ny fandaharan’asa FIHARIANA mba hahafahan’izy ireo hahazo fitaovana aha matihanina azy ireo tanteraka. Hihatsara ny kalitao ary hitombo ny vokatra ka hahatratra 160 taonina ny tantely vokarina isan-taona raha 60 taonina teo aloha. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 08 octobre 2020 20:03
Volamena: Haverina ireo 25,5kg naondrana an-tsokosoko tany Maurice
Atomboka ny dinika ara-diplaomatika miaraka amin’ny Nosy Maurice mikasika ny famerenana aty Madagasikara ho ao amin’ny Banky Foibe ny volamena milanja 25,5kg naondrana an-tsokosoko nakany Maurice ny fiandohan’ny taona 2019. Efa nisy ny didim-pitsarana nivoaka teto Madagasikara ny tokony hamerenana ireo entana ireo aty amintsika sy ny lamandy ary ny sazy mihatra amin’ireo izany nanao izany fanondranana antsokosoko izany. Tapaky ny Filankevitry ny Minisitra ny 30 septambra 2020 fa atao avy hatrany ho fananam-pirenena, ary hapetraka ao amin’ny Banky Foiben'i Madagasikara ireo volamena sy harem-pirenena tratra sy aondrana an-tsokosoko miainga eto Madagasikara.
De gros groupes électrogènes continuent d’arriver pour renforcer la production de la société d’Etat Jirama. Un de ces gros matériels était, acheminé sur Antananarivo depuis le port de Toamasina à bord d’un convoi exceptionnel escorté par des militaires les 18 et 19 septembre. L’acquisition de ces biens de production se fait dans le cadre du Projet d’amélioration de la gouvernance et des opérations du secteur électrique (PAGOSE) financé par la Banque mondiale à hauteur de 65 millions de dollars. Le projet initial approuvé le 23 mars 2016 par le conseil d’administration de la Banque était prévu pour trois ans.Mais, à son stade actuel, il s’étendra jusqu’au 31 décembre 2021.
mercredi, 30 septembre 2020 13:07
Tetikasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny hametraka toerana hivarotana « voiture d’occasion » etsy Andohatapenaka akaikin’ny kianja Maki. Kasaina hovitaina alohan’ny faran’ity taona ity ny asa.
mardi, 29 septembre 2020 20:39
Fitaterana anabakabaka: Nisitaka ihany koa Ethiopian
Araka ny lamina napetraky ny mpitondra dia hisokatra amin'ny zotra ivelany i Nosy be manomboka ny 1 oktobra 2020. Nametraka fangatahana teo anivon'ny ACM sy ny ministeran'ny fitaterana ny kompania Ethiopian ahafahany miasa ampitohy ny any ivelany amin'ny Nosy Be. Nahazo alalana izy narahina fepetra maro, anisan'izany ny fitondrany ihany mpizahatany manana tapakila mandroso sy miverina.Tsy azony atao izany ny mitondra ireo tera-tany na monina eto an-toerana, hanainga hanao sera any ivelany na amangy fianakaviana, tsy azony atao ihany koa ny mitatitra ireo voahidy any ivelany nanomboka ny volana mars 2020 hiazo an'i Nosy be.
mardi, 29 septembre 2020 16:07
Sandan'ny pétrole: 40.60$ ny baril
Raha tsy nihetsika tamin'ny vidiny ny solika teto Madagasikara, ny lasantsy 4 100ar, ny gazoala 3 400ar, ny solika fandrehatra 2130ar nanomboka tamin'ny 20 jona 2019, dia nihena hatrany izany vidi-tsolika izany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nisy fiakarany kely izy io andro vitsy 1.2%, ka manodidina ny 40.60$ ny baril solika amerikanina WTI, mbola tsy voadio, amaritana ny vidiny eo amin'ny bourse de New York, raha 41.53$ kosa ny baril n'ny Brent, solika Arabo, Afrika ary any Eoropa avaratra. Ny baril dia eo amin'ny 159 litres eo. Fa amin'ny tonne no famarotana azy io 1tonne = 1208 litres.Ny solika mbola tsy voadio, tsy misy fitaterana sy hetram-panjakana izany dia any amin'ny 0.26$ na 1010,36 ariary ny litatra.